ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားရာဝယ်
အင်းးးကျွန်တော်ကတော့ တာ့တာ လိုက်တာပါပဲ..။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဖတ်ပြီးပြန်တော့ မယ် တာ့တာ ဦးပေါ
ဟုတ်ပါ့။ ကိုပေါပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်။ ဘယ်လို ပြောပြော အဓိကကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည် အဆင်ပြေဖို့ပဲ။
ko paw you are wrong and that is not good for u and reader you do not understand definitly about that
“တာ့တာ”က ကုလားစကားဖြစ်ပြီး၊ “ဖြေးဖြေး...” ကတော့ တရုတ်စကားကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တာ့တာကတော့ နည်းနည်း ကလေးဆန်သလိုပါပဲ...။
တာ့တာ ဆိုတာ တာဇံဇတ်ကားထဲမှာ ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းလို့ မှတ်ဖူးပာတယ်။ တာဇံကားတွေပြန်ကြည့်တော့ တွေ့တော့မတွေ့မိဘူး။ ဘုန်းတှောကြီးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခာ သိမ်မွေ့ဖို့တော့လိုပာလိမ့်မယ်။ ကိုဧရာ ပြောသလို တာ့တာကတော့ ကလေးဆန်တာအမှန်ပာပဲ။ ဒူးနေရာဒူး တှောနေရာတှော ဆိုတဲ့စကားလဲ ရှိသားကလား။
သူမွေးဖွားကြီးပြင်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ခေတ်အခါ ၊အရပ်ဒေသနဲ့ သူ့အသက်အရွယ်အရတော့ ဒီလိုပြောတာက သဘောကျစရာ မဟုတ်လောက်ပေမဲ့ သဘာဝကျတယ်ဗျ။
ခုခေတ်ပေါ် ၃၀ ကျော် အဒေါ်ကြီးတယောက်က ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့နော့။
ပြီးတော့ တွေးမိသေးတယ် ။ တာ့-တာ က စကားမကြွယ်သေးတဲ့ ကလေးအရွယ်သုံးတာကတော့ ချစ်စရာကောင်းပါရဲ့။ ဒီအသုံးကို ကလေးသုံးလို့လည်း ယူရမလိုပါပဲ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေတိုင်းတော့ နေရာတကာ သုံးလို့မကောင်းလှသေးဘူးထင်တယ်ဗျ။ တာ့-တာကို မိသားစုဆွေမျိုးရင်းချာတွင်းမှာပဲ သုံးကြမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ တာ့-တာမှာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုသဘောပါနေတာပေါ့။ ချစ်သူရည်စားနဲ့ ညားကာစ လင်မယားချင်းမှာ ဆိုရင်တော့ တာ့-တာ က တီတီတာတာ အူရွှင်စရာလေးဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်ကလို ရင်းနှီးမှု အဆက်အစပ်မျိုး နည်းတဲ့သူချင်း တာ့-တာ ကြတာမျိုးကျပြန်တော့ တီသလို တာသလိုတင်မဟုတ်ဘူး အီသလို ကြာသလိုပါ ဖြစ်နေတတ်တာကိုးဗျ။ ဒါက ယောက်ျားမိန်းမရယ်မှ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ခေတ်အခါက ယောက်ျားချင်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမချင်းဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တတ်ကြတာကိုး ။
ဆိုတော့ မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။ ဦးဇင်းတပါး ဆွမ်းခံပြီး ပြန်ကြွမယ်ဆိုပါတော့။ ဒါမှမဟုတ် တခြား ကျောင်းကိစ္စ သိမ်ကိစ္စနဲ့ လာပြီး ပြန်ကြွမယ်ဆိုပါတော့ ထိုင်ရာက အထ တံခါးဝရောက်တုန်း ခြံဝရောက်တုန်းမှာ ဒကာမလေးက ဘုန်းဘုန်း တာ့-တာ ..တာ့-တာ နဲ့ လက်ကလေးပြလို့ နုတ်ဆက်တဲ့အခါ .....။ဘယ့်နှယ့်လုပ်မတုန်း။ မာတုဂါမလေးကတော့ စိတ်ရင်းစိတ်ရိုးနဲ့ နူတ်ဆက်သည်ပဲထားဦးတော့..... ဦးဇင်းခင်မြာ ..စဉ်းစားသာကြည့်တော့။
သူက နားကလောတယ်တဲ့ ။ ကိုပေါက မနှစ်သက်တဲ့ စိတ်အရင်းအခံကြောင့်မို့တဲ့ ။ မနှစ်သက်တဲ့ စိတ် >>> နားကလော ..ဒီလိုကိုး ။ မနှစ်သက်တဲ့ စိတ်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းလည်း ရှိမှာပေါ့ ။ ဘလိုင်းကြီး အမြင်ကပ်လို့ရယ်တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်မှာ ရေးထားသလို ဘာသာစကားအသုံးအနှုံးကြောင့်တော့ မဟုတ်တန်ရာဘူး။ အဲ့ဒီအသုံးအနှုံးမှာ သက်ရောက်နေတဲ့ သဘောထား အဓိပ္ပာယ်ကို အဓိကထားပုံရပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို တာ့-တာချင်း တူတူတောင် သူ့နေရာနဲ့ သူ ကွာသွားတာကိုးနော့။ ကလေးအရွယ် လူမမယ်ကတည်းက မပြင်ခဲ့ရင်လည်း ကြီးတဲ့ အထိ အကျင့်ပါတတ်တာကိုး ။ ဘုန်းကြီးပါ မချန် တာ့-တာကြတာကိုတော့ မျက်မြင်ပါပဲ ။ ခေတ်ကိုယ်တော်တွေကလည်း အလိုက်သင့်နေတတ်ကြပါပြီ။ ပြုံးပြီး လက်ပြန်ပြရတာပေါ့ ။ မျက်လွှာကြီးချပြီး လှည့်ထွက်သွားရင်တောင် ..ဟွန့် ...ဦးဇင်းကလဲ လို့ လုပ်ချင်ကြသေးတာကိုးဗျ။
နူတ်ဆက်တာဖြစ်ဖြစ် အချီအချပြောတာဖြစ်ဖြစ် လူလူချင်းဆိုရင်တောင် အလိုက်သင့်သုံးနှုံးရတာကိုး ။ စိတ်ရင်းမှန်ဖို့ နားလည်ဖို့ အဓိက ဆိုပြီး စိတ်ရှိသလို ပြောလို့ ရတယ်ရယ်မှ မဟုတ်တာ ။ ရဟန်း သံဃာနဲ့ လူဆို ပိုဂရုစိုက်ရမှာပေါ့ ။ ဥပမာ .. ဆွမ်းဖိတ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ ။ ဟာ .. ဦးဇင်း မနက်ဖြန် ကျနော့်မွေးနေ့ ။ အဲ့ဒါ အာရုဏ်လေ။ ပုံး လာဆွဲဖို့ လာဖိတ်တာ ။ ဦးဇင်း ပုံးဆွဲပြီး ပြန်ရင် ပေးလိုက်တဲ့ သင်္ဃန်းတွေပါ လိုက်ပို့ပေးမယ်ဗျာ။
ကောင်းမလားဗျာ ။ တာ့-တာ က သေးသေးလေး ထင်ရပါတယ် ။ မရိုင်းလောက်ဘူး ထင်ရပါတယ် ။ဒါပေမဲ့
ဘာအရာ ဘယ်ကိစ္စပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့နေရာနဲ့ သူပဲ ကောင်းပါတယ် ။
ရှည်သွားပြီ ။ ကိုပေါဆီမှာ အရှည်ဆုံးရေးဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ မှတ်ချက်ပဲ။
ကျနော့် အမြင်တော့ အင်မတန် ပူပန်တတ်တဲ့ ရှေးမြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့ တွေ့မြင်ကရာ ဆူချင်ပြောချင်နားချချင်သော စိတ်ကောင်း အခံ၊ ဝသီ၊ ဗီဇ ကြောင့်သာပဲရယ်လို့ .....။
( ဆွေကြီးမျိုးကြီးထဲက မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ မန္တလေးကိုတောင် ၂ ရက်တပိုင်းပဲ ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး ဖုန်ရှုမဝခင် ပြန်ခဲ့ရသူပါ )
ကိုပေါ မဒမ်ပေါ နဲ့ သမီးလေး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ။
သားအမိသားအဖတွေရဲ့ chit chit chat chat လေးတွေ ထပ်ရေးပါဦးဗျား ။
လူထုဒေါ်အမာကို အပြည့်အ၀သဘောမကျပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘုန်းဘုန်းတာ့တာကတော့ မသင့်လျော်တဲ့ စကားဖြစ်နေတာအမှန်ပါ။ ဘုန်းဘုန်း သွားလိုက်ပါဦးမယ် ဘုရားလို့ ပြောသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ထွင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပေါက်စလေးကတည်းက (ကိုပေါတို့ခေတ်မှာ နှုတ်မဆက်ရဘူးလားတော့ မပြောတတ်ဘူး) မူလတန်းကျောင်းမှာကတည်းက ဆရာဆရာမတွေကို နှုတ်ဆက်လာတဲ့စကားပါ။ ဒီစာကို ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တာ့တာကို လက်ခံတာသက်သက်ပဲဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချိန်ကိုက် ဖျာထခင်းတာမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အားလုံးသိဖို့ တာ့တာက အင်္ဂလိပ်စကား စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယစကားလို့ပြောသွားတဲ့ တစ်ယောက်က ကုလားတွေပြောတာပဲ ကြားဖူးလို့ထင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က ဒေါ်နယ်လ်ဒတ်ကာတွန်းကြည့်ဖူးရင် တာ့တာဘယ်ကလာလဲသိပါတယ်။ http://dictionary.reference.com/browse/ta+ta
“တာ့တာ” let recognize English Prof.E.J. Kan Gyi that she taught the pose of girl in present time showing steadily waved hands.
I realize all terms are dialect usages.
I hope you could post the standard rules and regulations "ထုံးမီစံရ" for greeting words later on.
October 13, 2010 10:48 PM က Anonymous ပြောတာ ကျွန်မနဲ့ အမြင်တူပါတယ် (ဘုန်းကြီးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ကိစ္စမှာ)
လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ တာ့တာကြတာကတော့ သူတို့သဘောပါပဲ။
Anonymous (October 13, 2010 10:48 PM)... အခုလို တခုတ်တရ အချိန်ပေးပြီး မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖတ်ပြီး နည်းနည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောချင်တာလေးတွေရှိလို့ အောက်မှာ ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်တာက ဒေါ်အမာရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဟိုတနေ့က ဖတ်ဖြစ်လိုက်လို့ ရေးလိုက်တာဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းကျရင် ဒီသဘောကို ရေးချင်တာကတော့ ကြာပါပြီ။ ဒေါ်အမာရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း နားလည်ပါတယ်။ နောက်တချက် မန္တလေးမှာ ကြီးပြင်းသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဝေါဟာရကြွယ်ဝမှုကို ဂုဏ်ယူလေ့ရှိကြတဲ့အကြောင်းကို ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့ တသက်တာမှတ်တမ်းမှာ ဖတ်ရကတည်းက ရိပ်စားမိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းကျတော့ သူမိခင်က နန်းတွင်းသူဖြစ်လို့ အင်မတန် ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ သင်ပေးတာကိုတောင်မှ သူက နားကလောတဲ့အလျောက် မှတ်ဉာဏ်လည်းကောင်းပါလျက်နဲ့ (မိခင်ရဲ့ ခေါင်းအခေါက်ကို ခံပြီး) သာမန် အသုံးအနှုန်းကို တမင်ရွေးသုံးတဲ့လူလို့ ဆိုပါတယ်။ သူကတော့ စကားအသုံးအနှုန်း ချိုသာယဉ်ကျေးမှုထက် အပြုအမူရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ လုပ်ရပ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ရွှေဥဒေါင်းကြီးရဲ့ အဲဒီအဆိုကို သဘောကျမိသူ တယောက်ပါ။
တကယ်တော့ ဒီအယဉ်အကျေး စကားတန်ဆာတွေဟာ လူတွေက လူ့လောကအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကိစ္စတွေ ပိုပြီး မရှုပ်ရှုပ်အောင် အပိုဆာဒါးတွေ တမင်ထွင်နေတာလို့ ကျနော့်ဘာသာ ယူဆပါတယ်။ ရိုးသားစွာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သုံးစွဲသူတွေ ရှိသလို အဲသည်စကားလုံးအလှတွေကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး မရိုးမသားကြံနေသူတွေကလည်း တပုံကြီး မဟုတ်ပါလား။
ကျနော်တွေးကြည့်တာ ဗုဒ္ဓကို မြက်ရှစ်ဆုပ်ကို လှူတဲ့ မြက်ရိတ်သမားဟာ သူလှူတဲ့အချိန်က ဒီလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဘာညာကွိကွတွေ ပြောပြီး ပေးလိုက်တာ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။ “ လိုချင် ယူသွားလေ” လို့ ပြောပြီး စိတ်ရင်းခံနဲ့ ရက်ရက်ရောရော ကူညီလိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂျူးရဲ့ “သစ်တစ်ပင်ကောင်း” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတပုဒ်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားရွာကလေးတရွာကို သာသနာသွားပြုတဲ့ ရဟန်းတပါးအကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေက အမဲရလာရင် ရဟန်းရဲ့ ကျောင်းမှာ အမဲပေါင်တို့ ဘာတို့ စားဖို့ လာချိတ်ပေးသွားသတဲ့။ ဘုန်းကြီးဆိုတာ သူ့ဘာသာ ချက်ပြုတ်စားရမှန်းမစားရဘူး၊ ဘုန်းကြီးကို ဆွမ်းကပ်ရတယ်ဆိုတာတွေ မသိတဲ့အလျောက် ဒီလိုပဲ စေတနာနဲ့ လာပေးသွားတာပေါ့။ သူတို့လုပ်ရပ်ဟာ ကျနော်တို့ နားလည်နေတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအတိုင်း ကွက်တိဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အပြုအမူမှာ စေတနာ အပြည့်ပါတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
နောက်တခုက ဒကာမလေးက ဦးဇင်းကို တာ့တာ ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့.... ကျနော့်အမြင်အရ.... နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်ရင်းက သန့်စင်နေရင် ပြီးတာပါပဲ။ “တာ့တာ”လို့မပြောဘဲ နှုတ်ဆက်စကားကို “ဘုန်းဘုန်း၊ နောင်လည်း တပည့်တော်မ အိမ်ရှေ့မှာ နေ့တိုင်းဆွမ်းရပ်တော်မူပါ” ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားမျိုးကို ညုတုတုလေး ကြာပစ်ပြီး ပြောနေရင်းလည်း ဘာထူးမှာလဲနော့။ ဘုန်းကြီးကလည်း သဘောရိုးနဲ့ပြောတဲ့ “တာ့တာ” ဆိုတာလောက်ကို ဖီးလ်ယူပြီး သာယာနေသေးရင် ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ဒီကိုယ်တော် သိပ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။
နောက်တခုက ကလေးအရွယ် လူမမည်ကတည်းက မပြင်ခဲ့တာနဲ့ လူကြီးအထိ အကျင့်ပါမယ်လို့လည်း ပြောလို့မရဘူးဗျ။ ကျနော်တို့လည်း ငယ်ငယ်က မန်မန်း စားမယ် ပြောခဲ့ပေမယ့် အရွယ်ရောက်လာတော့ ဘယ်သူမှ မန်မန်းစားမယ် မပြောကြတော့သလိုပေါ့။
ဘုန်းကြီး မနက်ဖြန် ကျနော့်မွေးနေ့.... ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကွန်မင့်ကို ဖတ်နေရစဉ်ကတော့ ဟာသအနေနဲ့တော့ ရယ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ်မှာကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ သာသနာပြုတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားက လာဖိတ်တဲ့အခါ... “Tomorrow is my birthday. I want to provideabreakfast to you. After the meal, I will send all the monks back." လို့ ပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဗျ။ စကားကပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နီပေါက လာတာဆိုတော့ သူထွန်းကားခဲ့စဉ်အခါကတောင် ဒီလို ဘုန်းကြီးနဲ့လူ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှိခဲ့ဟန်မတူပါဘူး။ “တင်ပါ့ဘုရား” “ဘုန်းပေး” “ကြွတော်မူပါ” စတာတွေဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ ပိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ သူတို့ဘာသာ ယူဆတဲ့အလျောက် ခေတ်အဆက်ဆက် တီထွင်သုံးစွဲလာခဲ့ကြတာ။ တကျောင်းတဂါထာ၊ တရွာတပုဒ်ဆန်းဆိုသလို ဒေသမတူတာနဲ့ ဒီအသုံးတွေကလည်း တနယ်နဲ့ တနယ်မတူကြတော့ဘူး။ ဒီဖက်ခေတ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါ အဲသည်လို အလွန်အကျွံ ယဉ်ကျေးပြရာမှာကို စိတ်မပါတဲ့၊ တွန့်ဆုတ်တဲ့ (ကျနော်တို့လို) လူစားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ တခြား သာမန်ဝေါဟာရကို တမင်ရှောင်သုံးဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်းစံထားတွေက အရမ်းပြင်းထန်းလွန်းပြီး ကိုယ့်အတွက် ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမယ့်အထိလောက်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ကလည်း အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး မသုံးမဖြစ် သုံးရတဲ့အခါရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို အပိုအလုပ်တွေလို့ ထင်မြင်တာတော့ ထင်မြင်မိတာ တပိုင်းပါပဲ။
မိတ်ဆွေ နောက်ဆုံးမှာ ရေးထားတဲ့... “ကျနော့် အမြင်တော့ အင်မတန် ပူပန်တတ်တဲ့ ရှေးမြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့ တွေ့မြင်ကရာ ဆူချင်ပြောချင်နားချချင်သော စိတ်ကောင်း အခံ၊ ဝသီ၊ ဗီဇ ကြောင့်သာပဲရယ်လို့ .....။ ” ဆိုတာတော့ ကျနော် ယုံမှားသံသယ မရှိပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲသည်လိုပဲ မြင်ပါတယ်။
ကျနော်တော့ မန္တလေးကို အခုထိ တခေါက်မှ မရောက်ဖူးသေးဘူးဗျာ။ နောင် စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီး အလုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုမှ တခါတခေါက် အလည်ရောက်အောင် သွားရမှာပေါ့။း-) မိတ်ဆွေလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျား။
BoX.... ........ မင်္ဂလာပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ထွင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပေါက်စလေးကတည်းက (ကိုပေါတို့ခေတ်မှာ နှုတ်မဆက်ရဘူးလားတော့ မပြောတတ်ဘူး) မူလတန်းကျောင်းမှာကတည်းက ဆရာဆရာမတွေကို နှုတ်ဆက်လာတဲ့စကားပါ။
ကျနော့်ပို့စ်ထဲမှာလည်း ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲ ဆရာဝင်လာချိန် နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ သုံးတာကလွဲလို့ အပြင်မှာ အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ မသုံးဘူးလို့ ရေးထားပါတယ်။ အခုခေတ်တော့ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းမှာ သုံးသေးသလားတော့မသိ။ “မင်္ဂလာပါရှင်...အခုဆိုရင် ခရီးသည်များ စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ လေယာဉ်ကြီးဟာ.....” ဆိုတာမျိုး။
....... ဒီစာကို ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တာ့တာကို လက်ခံတာသက်သက်ပဲဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချိန်ကိုက် ဖျာထခင်းတာမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အားပါးပါး။ ဖျာခင်းစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာ။ လူက ဝလို့ ဖျာပေါ်လဲ မထိုင်နိုင်ပါဘူး။ ဒေါ်အမာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်စရာ အကြောင်းလည်း မရှိပါဘူး။ သူ့ကို လေးစားတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိလို့ လူမမြင်ဘူးပေမယ့် ကျော်ရင်မြင့်တို့ (Burma Conference လာတက်တာထင်တယ်) စင်္ကာပူလာတုန်းက လူကြုံလက်ဆောင်တောင် ဝယ်ပြီး လက်ဆောင်ပါးလိုက်ဖူးပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အမြင်တွေ (အထူးသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့) သူ့အမြင်တွေကို အခုနောက်ပိုင်း သိပ်လက်မခံတော့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းလို့ ဆိုရတာက တချိန်တုန်းကတော့ ကျနော်လည်း ဒေါ်အမာတွေးသလို၊ ဒေါ်အမာရေးသလို လက်ခံခဲ့ဖူးလို့ပါ။
ကိုပေါကတော့ ပါလေရာငပိချက်ပဲ ပြီးတော့လဲ ဝိဝါဒ အလွဲတွေကို လိုက်ညှိဘို့ ကြိုးစားနေတဲ့ နပေါကြီး...
ဘယ်လိုပြောပြော နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်ရုံနဲ့တော့ မပြီးဘူးနော်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်ပေမယ့် အဆင်ပြေပါ့မလား။
ကိုယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆိုအမိန့်ကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးတဲ့။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာလေ။ ဘုရားသားတော်တွေလို့ ပြောကြတဲ့ သံဃာအတွက် သီးသန့်သုံးနှုန်းရတဲ့ အသုံးအနှုန်းရှီပါတယ်။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကအစ မိဘတွေ ဆရာတွေက သွန်သင်ပေးကြပါတယ်။
မလိုက်နာခဲ့ရင် သူတပါးက မိ မဆုံးမ ဖ မဆုံးမ သားသမီးတွေလို့ ကဲ့ရဲ့ ပစ်တင်ကြမှာပါ့။ ကိုယ်အသုံးမကျတာနဲ့ ကိုယ့်မိဘ ကိုယ်ဆရာသမားတွေ မထိခိုက်စေပါနဲ့။ မကောင်းပါဘူး။
သူငယ်ချင်းကို ဟေ့ကောင်ကြီး- ခွေးမသားကြီး လို့ ချစ်စနိုးခေါ်သလို ခင်ဗျားတို့ မွေးသဖခင်အဖေကို ဟေ့ကောင်ကြီး ခွေးမသားကြီးလို့ ခေါ်လို့ရမလား။
ကိုယ့်ရည်းစားကို ချစ်သဲလေး၊ မိန်းမလေး ခေါ်သလို ခင်ဗျားတို့ မာတာမိခင် ကျေးဇူးရှင်ကို သွားခေါ်မလား။
ယဉ်ကျေးမှုကို အလေးအမြတ်ထားတဲ့ လူမျိုးတိုင်းမှာ စကားလုံးရွေးချယ်သုံးနှုန်းခြင်းကို ဂရုစိုက်ပါတယ်။
Anonymous (October 14, 2010 12:28 AM).... “မိ မဆုံးမ ဖ မဆုံးမ သားသမီး” ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မိဘက သူတို့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကြည့်ပြီး ကောင်းတယ်လို့ သွန်သင်တိုင်း မိဘစကားကို မြေဝယ်မကျနားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် မိဘအလိုလိုက်တဲ့ သားတယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အမြဲမှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့သူတယောက်တော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ ဗုဒ္ဓတောင် သူ့မိဘစကားကို မြေဝယ်မကျနားထောင်ခဲ့ရင်၊ သူ့မိဘ ဆိုဆုံးမတဲ့အတိုင်းသာ လိုက်နာခဲ့ရင် သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရဖို့ဝေးစွ၊ တောထွက်ဖြစ်တော့မှာတောင် မဟုတ်ဘူးဗျ။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေမှာ မိဘစကားကို မြေဝယ်မကျ နားထောင်ရမယ်ဆိုတာ ပါလို့လားဗျာ။ ကာလာမသုတ်မှာ ဘယ်သူပြောပြော မျက်စိမှိတ်မယုံဘို့တောင်မှ တိုက်တွန်းထားတာမဟုတ်ပါလား။
ဗုဒ္ဓက တရားတွေကို မြန်မာလို ဟောခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဘုန်းကြီးကို “တင်ပါ့”၊“ဘုန်းပေး”၊ “ကြွပါ” ဆိုတာတွေနဲ့ ဆက်ဆံရမယ်လို့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ မပေးခဲ့ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်ကြံနေတယ်၊ ပြန့်ပွားအောင်လည်း ကြိုးစားနေတဲ့ လယ်ယာမြေကောင်းနဲ့တူတဲ့ သံဃာတွေကို ချဉ်းကပ်ပါ။ ရိုသေပါ။ လှူဒါန်းပါ လို့ပဲ ဆိုခဲ့တာပါ။
အရိုအသေပေးတယ်ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ပုဆစ်တုပ်ထိုင်ပြီး ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ကန်တော့တာကို ကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့လူက အဲသည်နည်းနဲ့ ကန်တော့မယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာ မြေကြီးပေါ်ကို ဝမ်းလျားမှောက်ပြီး အရိုအသေးပေးတာကို ကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့လူကလည်း အဲဒီနည်းနဲ့ အရိုအသေပေးမယ်။ ခါးထက်ဝက်ချိုးပြီး ဦးညွတ်ပြခြင်းဖြင့် ရိုသေကြောင်းကို ပြတဲ့လူလည်း ရှိနိုင်တယ်။ သူကြိုက်နည်းနဲ့ သူအရိုအသေပေးကြတာပေါ့။
ကျနော့်အမြင်တော့ သံဃာတပါးကို သူ့သီလ၊ သမာဓိ၊ တရားအားထုတ်မှုတွေကို ရိုသေလေးစားတယ်ဆိုရင် သူ့လမ်းကြောင်းကို ကောင်းကောင်းဆက်လျှောက်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းဟာ ဒါ ရိုသေမှုကို ပြခြင်းတမျိုးပဲဗျ။
သူ့တရားကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အဲသည်တရားကို သူ့ထံကနေ အသေအချာ ခံယူပြီး ကိုယ်တိုင် လိုက်နာကျင့်သုံးတာဟာ အကောင်းဆုံး အရိုအသေပေးခြင်းတမျိုးပဲဗျ။ ရှေ့တွင်တော့ “အာမဘန္တေပါ အရှင်ဘုရား” လုပ်လာပြီး နောက်ကွယ်ကျ တရားနဲ့မညီတာတွေလုပ်တာဟာ ရိုသေတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူးဗျ။ အဲဒါ တဖက်လှည့်နဲ့ ညစ်တာပဲ။ တနည်းပြောရရင် အောက်တန်းကျ ရိုင်းစိုင်းတဲ့အပြုအမူပဲ။
“ကိုယ့်ကျင့်တရား၊ သီလ” တို့ကတော့ မဖြစ်အနေ အလေးအမြတ်ထားရတဲ့အရာတွေပါ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ မိတ်ဆွေပြောသလို မဖြစ်မနေ အလေးအမြတ် ထားရတဲ့ အရာမဟုတ်။ လူမျိုးမတူရင် ယဉ်ကျေးမှုလည်း မတူနိုင်ဘူး။ မိတ်ဆွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် အထုံပါရမီဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်မှာပဲ။ အရင်ဘဝက မိတ်ဆွေဟာ လူမျိုးခြားဖြစ်ခဲ့သူတယောက်ဆိုရင် အခု မြန်မာလူမျိုးဖြစ်လာပေမယ့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို နှစ်သက်သူ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မနှစ်သက်တာနဲ့ပဲ သူ့ကို မယဉ်ကျေးတဲ့လူ၊ ရိုင်းတဲ့လူလို့ ပြောလို့မရဘူး။ အဲသည်လို ပြောချင်ရင် မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး၊ အယဉ်ကျေးဆုံး ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ သံသယကင်းရှင်းအောင် အရင် သက်သေပြရမယ်။ သက်သေမပြနိုင်ရင် အဲသည်လို စွတ်စွဲတာဟာ မှားယွင်းနေတယ်။
နောက်တခုက ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ပြောင်းလဲနေတယ်။ အသေမဟုတ်ဘူး။ ပျူခေတ်၊ ပုဂံခေတ်က ယဉ်ကျေးမှုတွေ အခု ဘယ်မြန်မာက ဆက်ခံကျင့်သုံးနေသေးလို့လဲ။ ယိုးဒယား၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ စတဲ့ဘေးနိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမှုတွေ သမိုင်းတလျှောက်မှာ စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်ခဲ့တာလည်း အထင်အရှားဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အလေးအမြတ် ထားရာမှာလို့ ဘာကြောင့် ပြောနေဦးမှာလဲ။
တကယ်လို့ မိတ်ဆွေပြောတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ Culture ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို ပြောချင်တာဆိုရင်လည်း အဲဒီ ယဉ်ကျေးမှုစံက တသမတ်တည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ မြန်မာတွေ လူကြီးရှေ့မှာ ခါးကုန်းသွားတာကို တခြားလူမျိုးခြားတွေက ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူလို့ ထင်ချင်မှ ထင်မယ်။ ဒီတော့ ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့် ဒီအပေါ်ယံ ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ အနှစ်သာရမဟုတ်ဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေကို ခေါ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို မိဘတွေကို သုံးမလား မေးထားတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေနပ်ရင် ပြဿနာ မရှိပါဘူး ကျနော် အတိအလင်းဆိုထားပြီးပြီပဲ။ နစ်နာစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ မခေါ်ရင် ပြီးတာပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ ပေးရရင် ကျနော့်သမီးနဲ့ ကျနော်ဆိုရင်.... သမီးကို ကျနော်က “မိုးဝက်ပုပ်” လို့ခေါ်ရင် သမီးက ကျနော့်ကို “အောင်ဝက်ပုပ်” လို့ ပြန်ခေါ်တယ်။ ကျနော်က သမီးကို “မိုးအကျင့်မကောင်း”လို့ခေါ်ရင် သူကလည်း ကျနော့်ကို “အောင်အကျင့်မကောင်း” လို့ ပြန်ခေါ်တယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မအောက်မေ့ဘူး။ သမီးက ကျနော့်ကို ချစ်လို့ စချင်နောက်ချင်လို့ ပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်သိတယ်။ သမီးကလည်း သူ့ကို ကျနော်ချစ်လို့ အဲသည်လို ခေါ်တယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးက ကျနော့်ကို “ဖေဖေ” လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ခေါ်ပြီး တခုခုကို လိမ်ညာပြောတယ်ဆိုရင် ကျနော်က သမီး ကျနော့်ကို ရိုသေလေးစားမှု မရှိဘူးလို့ သတ်မှတ်မယ်။ ကျနော်ကလည်း သမီးလေး လို့ ချိုချိုသာသာ ခေါ်ပြီး တဖက်မှာ သမီးရဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကို ထည့်မစဉ်းစားဘူးဆိုရင် သူ့ကို ကျနော်က အပြန်အလှန်ရိုသေမှု မရှိရာရောက်တယ်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာက လူကြီးကို ရိုသေရမယ်ဆိုတာကြီး ဘယ်က စပေါ်လာသလဲတော့မသိ။ ကျနော့်အလိုအရကတော့ လူကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ လူငယ်ဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ။ လူကြီးဖြစ်ပေမယ့် လူငယ်က ကိုယ့်ထက် ထက်မြက်တယ်၊ တော်တယ်ဆိုရင် လူငယ်ကိုလည်း ရိုသေထိုက်ရင် ရိုသေရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲသည်ကိစ္စ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ တလမ်းသွားဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်က အဲသည်ကိစ္စကို လက်မခံဘူး။ လူကြီးဆိုပေမယ့် ရိုသေထိုက်အောင် မနေတဲ့လူတွေကို မရိုသေနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ဘုရားတဆူ ဂူတလုံးလို ရိုသေကိုင်ရှိုင်း ပြမနေနိုင်ဘူး။ လူကြီးဖြစ်ပေမယ့် လူ့အန္ဓတွေ အများကြီးပဲ။ အဲသည်လူတွေကို အကြောင်းမဲ့ ဦးခိုက်နေရင် ကိုယ်ညံ့လို့ပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်။
အင်း...ကိုပေါရာ..ဒေါ်အမာရေးတာဖတ်ပြီးတာကြာပါပြီ..ကျနော်ကတော့ ကျနော့ ဘွားအေကြီးကို သွားသွားမြင်တတ်တယ် (အမေ့ရှေးစကားဆောင်းပါးတွေဖတ်တော့) ကျနော် တို့က သူတို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ခေတ်ကို မမှီလိုက်တော့ ဒီအဖွားကြီးတွေ တယ်ပစိပစာများတာပဲ..သူ့ခေတ်နဲ့သူကို အလကားနေရင်းလိုက်ပြောနေတာပဲလို့ ထင်ခဲ့ပေမဲ့ ခုကျနော် အသက်၅၀ ကျော်လာတော့ ဒီလိုပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိတယ်ဗျာ.. လူငယ်တွေ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကို သုံးချင်သလို သုံးပြောချင် သလိုပြောတာကို မကန့်ကွက်သလို လူကြီးဆိုတာလဲ အဲလို နေရာတကာလိုက်ပြောတတ်တာမို့ သူတို့ပြောတာကိုလဲ မငြင်းချင်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်လဲ တခါတခါ ပြောချင်ပေမဲ့ အဖိုးကြီး စာရင်းဝင်မှာကြောက်လို့ ဘလော့ ကာလသားလုပ်နေရတယ်ဗျာ..
ကိုပေါရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်ပေမယ့် “ဘုန်းဘုန်း … တာ့တာ” ကိုတော့ ခံစားနှစ်သက်လို့ မရဘူး။ သင့်တော်ဆီလျှော်သော ဝေါဟာရလို့ ဘယ်ရှုထောင့်ကမှ လက်ခံစဉ်းစားလို့ မရပါ။
လူ၊ လူချင်းတောင် နှစ်ဦးတည်းရှိတဲ့ အချိန် ခင်မင် ရင်းနှီးမှု အတိုင်းအတာအရ ဘယ်လို ပြောဆိုဆက်ဆံ အရေးမကြီးပေမယ့် လူသူကြားမှာတော့ မိမိနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့သူရဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ ရိုသေလေးစားမှုအရ သင့်တော်အောင် ပြောဆို ဆက်ဆံကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အပြောအဆို အနေအထိုင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြင် အကြား သင့်တော် ဆီလျှော်သော အပြောအဆို အနေအထိုင်မျိုးကို ပိုမို နှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်။ ချစ်စရာ မြတ်နိုး နှစ်သက်စရာကောင်းသော ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ တန်ဖိုးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူရှေ့သူရှေ့မှာ ပြောဆိုနေထိုင်တဲ့အခါ ပိုမို အလေးထားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဟန်ဆောင်တာ မဟုတ်ပါ၊ မိမိရဲ့ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတွေကို ရိုသေလေးစားမှု ပြသခြင်းတစ်မျိုးပါ။
လူမှာ စိတ်က စောင့်ထိန်းရ အခက်ခဲဆုံးပါ။ စိတ်အရင်းခံက ကောင်းမွန်နေမှ ကျန်တဲ့ ကိုယ်နှုတ်ကို ကောင်းမွန်အောင် စောင့်ထိန်းရတာ မခက်ပါဘူး။ ကိုယ် နှုတ် နှလုံး (ကံသုံးပါးစလုံး) တူညီအောင် ပြုလုပ်နိုင်တာဟာ ကောင်းမွန် မြင့်မြတ်တဲ့ အလေ့အထပါ။
ကျွန်တော် ထင်တာတော့ လူထုဒေါ်အမာက အဲ့ဒီလို ဆိုလိုချင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါး နေအိမ်သို့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြွလာပြီး ပြန်ခါနီးရင် “ဘုန်းဘုန်း (ငါ) ပြန်ကြွတော့မယ်၊ တကာ” လို့ မိန့်လေ့ရှိပြီး အိမ်ရှင်ကလည်း “တင့်ပါ့ ဘုရား” (သို့) “တင့်ပါ့ ဘုရား၊ တပြည့်တော်တို့အိမ်ကို မကြာမကြာ ကြွတော်မှုပါဘုရား” အစရှိသည်ဖြင့် လာရောက်ကြွတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်ပြီး လက်အုပ်ချီပြီး နှုတ်ဆက်စကား ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။
မိုးကုတ်မှာသုံးတဲ့ “ဖြည်းဖြည်း ကြွတော်မှုပါဘုရား” ကတော့ လူထုဒေါ်အမာ ပြောသလို နားဝင် အတော်ချိုပါတယ်။ မိုးကုတ်မှာ တရုတ် လူမျိုးစုတွေ နေထိုင်တာများလို့ တရုတ်လို ပြန်ခါနီး နှုတ်ဆက်တဲ့ “ဖြည်းဖြည်း ပြန်ပါ” ကို မြန်မာမှုပြုရင်း “ဖြည်းဖြည်းနော်”၊ “ဖြည်းဖြည်း ပြန်ပါ” အစရှိသည်ဖြင့် ပြန်ခါနီး နှုတ်ဆက်လေ့ရှိတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ (မိုးကုတ်မှာ ချစ်စရာ နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်း တော်တော်များများကို အဲ့ဒီမှာ တစ်နှစ်လောက်နေတုန်းက သတိထားမိခဲ့တယ်။)
လူထုဒေါ်အမာ ပြောတဲ့ “ဘုန်းဘုန်း … တာ့တာ” ကိုတော့ မကြားဖူးလို့ သေချာမသိဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ လက်ပွန်းတသီးနေတဲ့ မာတုကာမတွေကနေ ကြားရတဲ့ မကြားသင့် မကြားအပ်သော နှုတ်ဆက်စကားပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တော်ရုံ ဘယ်တကာ၊ တကာမကမှ ဒီလို ပြောဆို နှုတ်ဆက်မယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။
တာ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညဘက် Chatting ပြီးတိုင်း TTFN (ta ta for now) လို့ အပြန်အလှန် ရေးလေ့ရှိတယ်။ ဒါလည်း Singaporean သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် TTFN ရေးတာ နားမလည်လို့ မေးတော့ အမေရိကန်တွေ နှုတ်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ စကား ta ta for now (ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့ မသိပါ) လို့ သိရှိ နှစ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ပါ အကျင့်ပါသွားတာ။
တာ.တာ ကို Wikipedia မှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။
<< TTFN is an initialism foracolloquial valediction, 'ta ta for now', based on 'ta ta', an informal 'goodbye', approximately equivalent to 'bye bye', 'see ya' or 'laters'. The expression came to prominence in the UK during the Second World War.>>
အားလုံး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ …
Ko Paw..... I fundamantally agree with you on this issue even though I do not like the fact that an adult saying ta ta toamonk. I disliked some of the articles by Daw Amar on cultural, traditional issues which I found so cliche. Culture,to me isaliving thing which moves forward and should not remain idle. Of course , there are conservatives ,moderates and liberals living in the society, each and every one of them is entitled to one's opinion especially when it comes toasensitive issue such as culture. Ko Paw.....I have been following your blog from which I learned that you consistently stick with what you believe in and what you stand for.So, the readers,by now should know what your conviction is.The conservatives conspicuously will never agree with you on this issue no metter how articulate you are. I consider myself liberal in many ways while you, in my judgement ,are liberal, liberal all the way. Anyway , I admire you for being so true to yourself.
တာ့တာကို ဘိလပ်မှာ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ ပြောကြတယ်။
ta-ta = goodbye (informal သုံးတဲ့စကား) ဆိုတာ ကျမလဲ ဒီရောက်မှ သိပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်း ပြောခဲ့ကြတဲ့ တာ့တာ ဘိုင့်ဘိုင် ချဲရီးယို တွေက ta-ta, bye bye, cheerio ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ခွဲခွါခါနီးသုံးတဲ့ နှုတ်ဆက်စကား (farewell greeting) တွေ ဆိုတာ နောက်မှ သိပါတယ်။ ဟိုအရင်ကတော့ တာ့တာ ကို ဗမာစကားပဲလို့ ထင်နေခဲ့မိတာ။
တာ့တာဆိုတာ ကလေးဆန်ပေမဲ့လို့ ကျမလဲ ခုအသက်အရွယ်ထိ တာ့တာ ဆိုတဲ့စကား သိပ်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘိုင့်ဘိုင် လို့ နှုတ်ဆက်ရမှာထက် တာ့တာလို့ နှုတ်ဆက်တာ ပိုပြီး ရင်းနှီးမှုရှိတယ် ထင်မိတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ချတ်တင်လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပြောရင်ဖြစ်ဖြစ် အိမ်လည်သွားပြီး ပြန်ခါနီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ တာ့တာလို့ပဲ ပြောလေ့ရှိတယ်။
အဲ ... သို့သော်လဲ ပေါ့လေ ... ဆရာတော် သံဃာတော်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာတော့ တာ့တာ ဘုန်းဘုန်းလို့ လုံးဝ ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ဆရာတော်တွေနဲ့ ဖုန်းပြောပြီးလို့ ဖုန်းချခါနီးရင် "ဦးတင်ပါတယ် ဘုရား" လို့ ပြောပြီးမှ ဖုန်းချပါတယ်။ ပြန်ခါနီးရင်လဲ ခွင့်ပြုပါဘုရား ဆိုပြီး ကန်တော့ပြီး ပြန်တာပဲ။ တာ့တာလို့ မသုံးမိဘူး။
ဝေါဟာရ အင်မတန်ကြွယ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် ပြောင်းလဲ သုံးနှုန်းရတဲ့ ဗမာစကားကို ကျမကတော့ အင်မတန် သဘောကျမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ ၀င်းဦးရုပ်ရှင်တခုထဲက ဇာတ်ဝင်တေးတပုဒ် အမှတ်ရမိတယ်။
"လူနေတော့ အိမ်ခန်း၊ ရဟန်းနေတော့ ကျောင်း၊ သူတောင်းစားနေတော့ ဇရပ်၊ မြတ်သောဘုရင် ပလ္လင်နန်းတော်" … တဲ့။
ထမင်းစားတယ်၊ ပွဲတော်တည်တယ်၊ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတယ် …
အိပ်တယ်၊ စက်တော်ခေါ်တယ်၊ ကျိန်းတယ် …
စသဖြင့် ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်က တမျိုးတည်းပေမဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် ပြောင်းလဲသုံးကြတယ်။ ဒါ့ပြင် အဲဒီ ဝေါဟာရတွေက ဒေသအလိုက် ကွဲလွဲတတ်ပြီး စာသုံးနဲ့ စကားသုံးကလဲ ကွဲလွဲပြန်သေးတယ်။ အဲဒီလို အများကြီး ပြောင်းလဲသုံးစွဲလို့ရတဲ့ ဗမာစကားကို ကျမဖြင့် သိပ်နှစ်သက်တာပါပဲ။
ပုဂံခေတ်ကလို သေခမူနာသရောလို့တော့ ခုခေတ်မှာ မသုံးကြတော့ပေမဲ့ …
သေတယ်၊ ကွယ်လွန်တယ်၊ နတ်ရွာစံတယ်၊ ပျံလွန်တော်မူတယ်၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ် … လို့ ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်အတန်းအလိုက် ခွဲခြားသုံးနေကြတုန်းပါပဲ။
ဘုရားသေတုန်းကလို့ ဘယ်သူကမှ မပြောကြပါဘူး။
ဒါတွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုအရရော ထုံးတမ်းစဉ်လာအရပါ သတ်မှတ် သုံးစွဲနေကြတာမို့ ပစ်ပယ်လို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အတွင်းစိတ်ရင်းက အဓိကဆိုတာ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာလ ဒေသ နေရာ ဌာန ပုဂ္ဂိုလ် စတာတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ သုံးစွဲတတ်ရင်/သုံးစွဲနိုင်ရင်တော့ ကိုယ်သုံးတဲ့ စကားလေးက ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆပါတယ် ကိုပေါရေ … ။
Based on your articles I have no idea upon Burmese culture and Buddhist culture.Are they same or different?
အကို ဘလောက်ကေ၇းထားတာ Facebook မှာပြန်ရှယ်ဘို့ link လေးတွေတပ်ပေးပါလား၊ ပို့ရေးထားတဲ့အောက်မှာလေ တခြားဘလောက် မဖတ်တဲ့လူတွေဖတ်လို့ ရအောင်ပါ
Everyone knows no drink and eating on public transports in S’pore.
By experience,agirl took bum and no on shunt to her, after she got down an old man near by her seat took potato chips. A new girl came and she did so accordingly.
If someone retardedafirst girl that won’t be happened for next.
Bad manner is easy to follow and spread out swiftly.
I do appreciate on Daw A Mar's notice though some words seem to be conservative.
Most Myanmar came to conservative at the age after 40S as judged by time.
"...အထူးသဖြင့် “ဘုန်းဘုန်း တာ့တာ” ကိစ္စမှာ စကားမပြောတတ်သေးတဲ့ ကလေးတွေ နားလည်လွယ်တဲ့ ဝေါဟာရစကားလုံးနဲ့ သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူထုဒေါ်အမာအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဝေဖန်တာ လောကြီးသွားတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။..."
I hope the readers should not miss out to read the above sentence that Ko Paw wrote in his article.
I am writing this because I don't understand why the readers are arguing that adults never use to say " ta- ta " to monks.
Ko Paw didn't say that the adult use to say " ta-ta to monks " in his article too.
This argument should actually goes to Daw A Mar because she started this issue, not clearly defining whoa are saying " ta-ta" to monks, adults or small kids. ( But sadly, she's not in this world anymore.)
If she was saying it is wrong to teach small kids to say " ta- ta , Bone Bone " , may be she forgot the fact that small kids are unable to say complicated words like adults.
The parents should not deserve to be blamed too because of they did so to their small kids.
When those small kids grow old, like us, they will not say "ta-ta" to monks anymore. Do they?
They don't, for sure. So, why she is makingabig fuss out of this..may be age gap..gemeration gap..conservative..want to stop the changing world in her own way..!!!!
တာ့တာ ဆိုတဲ့စကား ဘယ်ကလာသလဲတော့ သေချာမသိဘူး။ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်မှာတော့ အဲဒီစကား ရှိတာသေချာတယ်။
လောရှည် ဘယ်လိုသိသလဲဆိုတော့ကာ Power Rangers Original Series မှာ Lord Z က Power Rangers ကို ဒီတခါ တကယ်နိုင်ပြီလို့ သူထင်သွားတဲ့ အခန်းမှာ "Ta Ta, Power Rangers" ဆိုပြီး လက်ကလေး ရမ်းပြီး နှုတ်ဆက်ပြတယ်။
ဖွတယ်နော နေရာတကာပဲ အကျင့်ကြီးကိုပါလို့
လူမျိုးတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူနဲ့ ယဉ်ကျေးကြောင်းကို ပြကြတယ်။ မြန်မာတွေက ယဉ်ကျေးကြောင်းပြချင်ရင် ခါးကုန်းသွားတယ်။ ဂျပန်တွေက ယဉ်ကျေးကြောင်းပြချင်ရင် ခါးကို သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီဂရီအလိုက်ညွတ်တယ်။ အဲလိုဂျပန်တွေ ခါးညွတ်ပြောရင် ဘယ်သူမဆို ဒါယဉ်ကျေးကြောင်းပြတဲ့ အမူအရာလိုနားလည်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မြန်မာတွေခါးကုန်းသွားတာဟာ မလိုအပ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအပိုဆာဒါးလို့ မပြောသင့်ဘူး။
ဖျာခင်းတာက လူထုဒေါ်အမာကို မဆိုလိုပါဘူး။ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာ ကိုပေါသိပါတယ်။ လူထုဒေါ်အမာကို ဝေဖန်လို့ပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ မတူရင် အချိန်မရွေး ဒေါ်အမာမကလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပဲပြောပြော၊ သိကြားမင်းကိုပဲပြောပြော လက်ခံနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာထပြောတာကို မကြိုက်လို့ ပြောရတာ။ ဘယ်လိုအချိန်လဲဆိုတာ ကိုပေါသိပါတယ်။
ဘုန်းပေးတို့၊ တင်ပါ့ဘုရားတို့ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေက ဘုရားခေတ်ကမရှိခဲ့တာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့ဦးနှောက်နဲ့ပဲ စဉ်းစားစဉ်းစား ဘုရားခေတ်တုန်းကလည်း ဘုရားကို ဝိသာခါတို့၊ အနာထပိဏ်တို့ ပြောတဲ့စကားက သူတို့လူအချင်းချင်းပြောနဲ့ စကားနဲ့တော့ အသုံးအနှုန်းကွာမှာ အသေအချာပဲ။
လူကြီးတွေကိုတင်မကဘူး၊ ရွယ်တူရော၊ ငယ်တဲ့သူတွေကိုပါ လေးစားသင့်ရင် လေးလေးစားစား ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။ လူကြီးတွေရဲ့ ဆုံးမစကားကို မြေဝယ်မကျနားထောင်ရမယ်လို့လည်း မဆိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုပေါပြောသလို မိဘစကားကိုနားမထောင်ဘဲ တောထွက်ခဲ့လို ဘုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘုရားက သူ့ခမည်းတော်နဲ့ မယ်တော်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးမဆက်ဆံခဲ့လို့လား။ ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာ အပိုဆာဒါးစကားတွေပြောပြီး ပကာသနအလုပ်တွေလုပ်တာကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကနေ ကိုယ်အမူအရာကို တစ်ဖက်သူနှစ်လိုဖွယ်ရှိအောင် ထုတ်ပြတာပဲ။
ကိုပေါက စိတ်အခံကအရေးကြီးတယ်ပြောလွန်းတော့ မေးချင်ပါတယ်။ စေတနာအတိုင်းအတာတူတူရှိတဲ့ လူနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က သူ့လက်ဆောင်ကို ခြေထောက်နဲ့ထိုးပေးပြီး ဟဲ့ကောင်ယူလိုက် လို့ပြောပြီးပေးမှာနဲ့ ယူပါလို့ ပြောပြီး ပေးမှာ ဘယ်ဟာက ပိုသင့်တော်သလဲ။ စေတနာတူလို့ နှစ်ခုလုံးက သင့်တော်တယ်ဆိုရင်လည်း..........................................................။
box ရေးသွားတာကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်.. ဘုန်းကြီးသွားပြီး တာတာ့လုပ်ရအောင် ခလေးအရွယ် မသိနားမလည်သေးတဲ့ အရွယ်ဆိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်.. ဒါတောင် မိဘတွေက ကွယ်ရာမှာ ပြောဆိုဆုံမရမှာပါ.. ကျမလဲ ငယ်ကဆို ဘုန်းဘုန်းများနဲ့ စကားပြောရင် အချိုးမပြေ အမြဲဖြစ်ပါတယ်.. ဟုတ် ဟုတ် နဲ့ပြောလိုပြော.. ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်တဲ့ ဟာကို ဘောင်းဘီတိုဝတ်မိလိုမိနဲ့ ဘရုတ်သုတ်ခပါပဲ.. ဒီလိုဖြစ်တိုင်း အမေကဆူ အမကပြောနဲ့ အသက် ၁၂ ၁၃ လောက်မှာ ကျမကောင်းကောင်းကြီး နားလည်နေပါပြီ..ဒါကမိဘတွေသင်ပေးရမယ့်အရာပါ.. ဒီခေတ်မိဘတွေ ကိုယ့်သားသမီးကို မသွန်သင်နိုင် ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဒါပြောတာ ပြသနာမရှိဘူးထင်နေကြတော့ စာနယ်ဇင်းကလူတွေ ပြောဆိုဝေဖန်အကြံရတဲ့ အဆင့်ရောက်ကုန်တော့တာပါပဲ.. ဒါကိုကျမတို့ ကြိုဆိုရမှာပါ.. စေတနာသည် အဓိကတွေ သာမညတွေနဲ့ ကိုယ့်မိရိုးဖလာ ယဉ်ကျေးမှုလေး ထိန်းသိမ်းတာနဲ့ ခွဲခြားသိနိုင်ကြပါစေ...
“အဲလိုဂျပန်တွေ ခါးညွတ်ပြောရင် ဘယ်သူမဆို ဒါယဉ်ကျေးကြောင်းပြတဲ့ အမူအရာလိုနားလည်တယ”်။
Superficial polite is worthless, new generation forget our ancestors got tortures during Japan invasion (same as Myanmar did it to Thai). Nang King massacre in 1927 was totally awesome and uncivilized in human history.
Most historical events, civilized countries oppressed to uncivilized peoples.
I seeastudent who bow down heads and body in front of teachers, and pissed off from corridor at night.
So, it is admirable person studded polite behavior with sincere mind.
ဘုန်း ဘုန်းတာ့တာ ဆိုတာကို မသင့်လျှော်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ သူတွေကို တခြား ဘာသာအနေကနေ ပြန်ကြည့် ကြည့်ပါလား .. အသင်းအုပ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ် မူစလင်ဘာသာက တရားဟောဆရာပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရင် နာမည်တပ်ပြီး တာ့တာလို့ ပြောကြတာပဲ. ဘုန်းကြီးကြမှ ကြားမကောင်း မြင် မကောင်းဘူးပြောကြတယ်. တကယ်တော့ ဘာသာရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး စဉ်းစားလို့ပါ. ဘာသာနဲ့ ဘာသာစကားက တခြားစီပါ ..
ကျွန်းပှောက Anonymous October 14, 2010 4:31 PM သို့
ဘာသာရေးကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး စဉ်းစားတာမဟုတ်ပာဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပြောနေတာပာ။ သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးသင့်တဲ့ စကားလုံးတွေ မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လို့ ထောက်ပြချင်တာပာ။ ဒာကိုနားမလည်ဘဲ ဘာသာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု လာမရောပာနဲ့။
ဗုဒဿဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ပြောမယ်။ ဘုန်းတှောကြီးတွေဆိုတာ လူနဲ့မတူဘူးလို့ ကျုပ်တို့ဘာသာကသတ်မှတ်တယ်။ လူလိုနေရာတိုင်း ကျင့်လို့မရဘူး။ လူ့စည်းကမ်းအပြင် ဘုန်းကြီးဝိနည်းရှိတယ်။
ခင်ဗျားပြောတဲ့ တစ်ခြားဘာသာတွေမှာ ရှိလား။ ရှိရင် သူတို့ကို လူလိုပဲတန်းတူဆက်ဆံရမယ်လို့ သင်ထားလား။ ဗုဒဿဒဘာသာဖြစ်ဖြစ် ခရစ်ယန်ဖြစ်ဖြစ် ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးကို တာ့တာမလုပ်သင့်ဘူး။ ဘုန်းကြီးကိုလည်း မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒာယဉ်ကျေးမှု။ ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးကိုတန်းတူဆက်ဆံနိုင်တယ်/ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုရင် အဂဿငလန်ဘုရင်မကြီးကို တာ့တာလို့သွားပြောကြည့်လေ။ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကိုယ်သိသွားတာပော့။
....ဖျာခင်းတာက လူထုဒေါ်အမာကို မဆိုလိုပါဘူး။ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာ ကိုပေါသိပါတယ်။ လူထုဒေါ်အမာကို ဝေဖန်လို့ပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ မတူရင် အချိန်မရွေး ဒေါ်အမာမကလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပဲပြောပြော၊ သိကြားမင်းကိုပဲပြောပြော လက်ခံနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာထပြောတာကို မကြိုက်လို့ ပြောရတာ။ ဘယ်လိုအချိန်လဲဆိုတာ ကိုပေါသိပါတယ်။ ....
လူထုဒေါ်အမာ ဆောင်းပါးကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်မှာ “လူထုအမာကို မဆိုလိုဘူး”ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ကျနော် တကယ်မသိဘူးခင်ဗျ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တည့်တည့်ပြောမှပဲ ကျနော်သိတော့မှာပဲ။ ဖွင့်ပြောလို့ရရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြစေချင်ပါတယ်။
လူထုဒေါ်အမာ ဆောင်းပါးတွေ (အထူးသဖြင့် အမေ့ရှေးစကား)ကို အမြင်ချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်း၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလျဉ်းသင့်သလို ရေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကာလအတော်ကြာကြာကတည်းက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိတာကြောင့် ရေးမိတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပို့စ်ထဲမှာပါ ရှင်းပြခဲ့ပြီးသားပါ။
ဖျာခင်းတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ “ဒီလို အချိန်မှာ ထပြောတယ်” ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုမှန်း တကယ်ကို စဉ်းစားလို့မရအောင်ပါဘဲ။ လူထုဒေါ်အမာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသတင်းတွေ ထွက်နေလို့လဲ။ ဘယ်လို ပွဲတွေ လန့်နေလို့လဲ။ ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျနော့်အတွက် (ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းသလို) ဘယ်လိုနေရာတွေ ဖြတ်လမ်းက ရသွားမလဲ။ ဘယ်လို အကျိုးတရားတွေ ဖြတ်လမ်းက ရသွားမလဲ စဉ်းစားလို့ မရအောင်ဘဲဗျိုး။ တကယ်တော့ ဒီ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်တွေကို ကျနော့်ဘလော့ဂ် စရေးကာစ အချိန်ကစလို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တာတွေတော့ အပေါ်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့သမျှဟာ တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်ပြောရင်လည်း အချိန်ကုန်တာသာ အဖတ်တင်မယ်။ မတူညီတဲ့ အမြင်တွေကို တထိုင်တည်းနဲ့ ပြောင်းလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော် နှလုံးသွင်းထားပြီးသားပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီလို ယူဆထင်မြင်တယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ခြင်းက အဓိက။ ကျနော့်အမြင်အယူအဆမျိုးကို တိမ်းညွတ်သူများရှိရင် အဲဒီအယူအဆမျိုးကို လက်ခံသူ များပြားကျယ်ပြန့်လာနိုင်တယ်ဆိုတာက ဒုတိယ။ အဲ... ဘယ်သူမှ လက်မခံလည်း ကိစ္စတော့ မရှိဘူးပေါ့နော်။ ကျနော်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆွယ်သလို လက်ငင်းအကျိုးအတွက် ဆန္ဒမဲ ကောက်ခံနေတာမှ မဟုတ်တာ။ သို့သော် လောကကြီးကို ကိုယ်မြင်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်စေချင်ရင် ကိုယ်ကစပြီး ပြောင်းလဲယူရမယ်ဆိုတဲ့ ဂန္ဓီကြီးစကားအတိုင်း တနိုင်တပိုင် ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ မဖြစ်လာတော့လည်း ဒီလိုပဲ သင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင် နှလုံးသွင်းရမှာပေါ့ဗျာ။း-)
ငပေါသမီးက သည်သို့ပြောလျှင် ပြုံး၍လက်ခံလိုက်ပါလေ။
မြန်မာဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမရှိသောကြောင့် ပြုံး၍သာ လက်ခံလိုက်ပါလေ။
q&mawmft&SifZeumbd0Houdk bkef;bkef;ac:rd&if udkaygawmhaoNyDq&m / wmhwmqdk&ifawmh ausmif;ay:u uefcsvdrfhr,faemh/ taemhtouf 21 Asm/ udkaygeJYvrf;rSmawGU&if aygayg vdkUac:r,faemf/ OD; awG ? udk awG xnfhawmhbl;/ udkaygBudKufwJh odk;aqmif;rSmvdkaygh/
udkaygorD;av;toHk;tEIef;awGvnf; tckt&G,fawmh em;axmifaumif;aygh/ enf;enf;BuD;vm&if em;0ifcg;r,faemf/ bdvyfqefw,fqdk&atmifvnf; taemfqdk bdvyfrSmbdvyfaNrawmifNzpfawmhr,f/ tazhudkemrnfwyfNyD;pum;aNym&Jaygif/ 0ufykyfvdkU pzdkUuawmh a0vma0;cifn/ taemfwdkYvnf; odyfcspfwJh om;tzygcifnm/
omoemrxGef;um; ? ဗုဒ္ဓbmomudkBum;awmifrBum;bl;wJha'ouvlawGu awmifwef;omoemNyKwJh&[ef;udk tpyxrrSm omrefvluJhodkYNyKrlqufqHcJhwmudk udkayguerlemNyawmh &ifav;onf/ awmifwef;omoemNyKwJh&[ef;udk NynfrrSmNyefvnfomoemNyK&ef yifhzdwf&awmhrnf/
q&mBuD;a&TOa'gif;&JU tqdkudkoabmus&ifvnf; q&mBuD;vdk vlpHkuav; Nzpfatmif t&ifBudK;pm;ygvm;cifnm/ tenf;qHk; ausmif;om;t&G,fuwnf;u
DCharles Dickens zwfcJhwJh q&mBuD;&JU odk;aqmif;bmomuRrf;usifrIudk “Tomorrow is my birthday. I want to provideabreakfast to you. After the meal, I will send all the monks back." vdkYawG;NyD;a&;wwfwJh udkaygt&ifavhvmoif,lygvm;cifn/ tJ'gqdk odk;aqmif;bmomrSmvnf; " Please , Sir , May I , Madam , Your Majesty , Would you be so kind , Would you mind , tp&dSwJh 'l;ae&m'l; ? awmfae&mawmf ,Of,Ofaus;aus;oHk;zdkUpum;vHk;rsm;&SdaBumif; ? What's up , Ta Tar, tp&dSwmawGwm formal r[kwfaBumif;odoGm;wmayghaemh/
NihonGo vdkUac:wJh *syefbmomrSmvnf; Kudasai ,O__ , Watashi pwmawGeJY,Of,Ofaus;aus;oHk;zdkUpum;vHk;rsm;&SdaBumif; ___ro, Ja, Boku, tp&dSwmawGwm formal r[kwfaBumif;avhvmoif,lygvm;cifn/
apwemrSef&ifNyD;wmbJqdkayr,fh ewfokဒ္ဓgudk acG;pm;cGufxJxnfhauR;&if b,folrS rpm;bl;cifn/ ( udkaygawmhrodbl; )
pdwfomt"duqdk&if t0Sgudk xrif;rSwfNyD; pm;Bunfhygcifn/
cHkawmfarmifusaygtvkyfaumif;vdkY Bum;xJu tefwDayg yg;&dkufcHae&tHk;r,faemf/
အဓိက အကြောင်းအရာ ဖြစ်သော ဘုန်းကြီးရပာန်း များကို နှုတ်ဆက်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြရာတွင် ဂျူး၏ ၀တ္ထုပါ တိုင်းရင်းသားများ ဒေသအတွင်း တိုင်းရင်းသားများမှ ၄င်းတို့ ရရှိသော အမဲများကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် လာချိတ်ကာ ပေးသွားကြခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသားက ဘုန်းကြီးကို နိုင်ငံခြား ဘာသာနှင့် ဆွမ်းစားပင့် (ဖိတ်) ခြင်းတို့ ကို ဥပမာ ပေးသည်မှာ အဓိက ဆွေးနွေးနေသော အကြောင်းအရာနှင့် ဆီလျော်မှု မရှိပာု မြင်ပါသည်။ အဓိက ဆွေးနွေးနေသည်မှာ မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာ ယဉ်ကျေးမှု အ၀န်းအ၀ိုင်းအတွင်း အကြောင်းအရာသာ ဖြစ်၍ ဥပမာ များမှာ ယဉ်ကျေးမှု နှစ်ခု ထိစပ်သည့် အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အမဲလာချိတ်ခြင်းသည် (ဘာသာခြား လူမျိုးခြား တိုင်းရင်းသား တဦးက)၄င်းတို့ ၏ ယဉ်ကျေးမှုမှ စိတ်စေတနာကောင်းနှင့် ယဉ်ကျေးသည့် အပြုအမူကို အခြားဒေသမှ လာသည့်လူ (ဘုန်းကြီး) အပေါ် ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျိုးတဦးမှာမူ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အမဲသွားချိတ်မည် မပာုတ်သလို သွားချိတ်လျှင်လဲ တိုင်းရင်းသား ဒေသမှ တိုင်းရင်းသား တဦး (ဗုဒ္ဓဘာသာ မပာုတ်သူ) သွားချိတ်စဉ်ကကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မည် မပာုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားသားက ဆွမ်းစားဖိတ်ရာတွင်လဲ I, you စသည်ဖြင့် သုံးနှုန်းကာ (အခြား သုံးစရာ နာမ်စားလဲ မရှိပါ) ပြောနေခြင်း ဖြစ်သော်လဲ စကား အစအဆုံးမှာမူ ယဉ်ကျေးစွာ ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်တွင် I, you ပာူ၍သာ ရှိသော်လဲ အခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ နာမ်စား အသုံးအနှုန်များ ဖြစ်သည့် His / Her / Your Majesty, His / Her / Your Highness, His / Her / Your Excellency စသည်ဖြင့်ရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ဘက်တွင် သာသနာရေး ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ကို မည်သို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲသည် အတိအကျ မသိသော်လဲ father / mother / brother / sister စသည်ဖြင့် ရှိပါသည်။ ကိုပေါနှင့် ကိုပေါ သမီး အပြန်အလှန် စနောက်သည့် အခေါ်အဝေါ် များ ကို တွေ့ ရပါသည်။ ကြည်နူးဖွယ် မိဘနှင့် သားသမီး အကြား မေတ္တာနှင့် ဆက်သွယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် ပြဿနာမှာ မရှိပါ။ နိုင်ငံခြားသားများ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လဲ အဖေ၊ အမေ၊ daddy, mummy မခေါ်ဘဲ အောင်၊ ပာန် ပာု ခေါ်နေလျှင်လဲ အဆင်ပြေပါသေးသည်။ သို့ သော် မြန်မာစကားပြော မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ကိုပေါသမီးက ကိုပေါတို့ ဇနီးမောင်နှံကို အောင်၊ ပာန် ပာုသာခေါ်နေပါမူ ကိုပေါတို့ ဇနီးမောင်နှံကော အခြားကြားရသူများပါ အဆင်ပြေနိုင်မည် မထင်ပါ။ ကိုပေါတို့ သက်တူရွယ်တူ (မြန်မာ)သူငယ်ချင်းများ၏ သိတတ် အရွယ်ရောက်နေပြီး ဖြစ်သည့် သားသမီး တဦးဦးကလဲ ဦးမပါ၊ ဒေါ်မတပ်၊ အန်ကယ်၊ အန်တီ မခေါ်ဘဲ နာမည်ရင်း အတိုင်းသာ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲနေပါက ကိုပေါ ကိုယ်တိုင်ပင် အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မည် မထင်ပါ။ ဒေါ်အမာ၏ ဆောင်းပါးသည် စကားတတ်ခါစမှသည် မူကြို၊ သူငယ်တန်း အရွယ် ကလေးများကို ရည်ညွှန်းလိုခြင်းမပာုတ်ဘဲ ပို၍ အသက်ကြီး သိတတ်လာသည့် ကလေးများနှင့် မိဘအရွယ် လူကြီးများကို ရည်ညွှန်းလိုသည်ပာု မြင်မိပါသည်။ ဆွေးနွေးလိုသည့် အချက်များ ရှိသေးသော်လဲ ဆွေးနွေးလိုရင်း ရောက်ပြီပာု မြင်သည့်အတွက် ဤမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ သိချင်စိတ် ဖြစ်မိသည်မှာ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း က ”စကားအသုံးအနှုန်း ချိုသာယဉ်ကျေးမှုထက် အပြုအမူရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ လုပ်ရပ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားတယ်” ဆိုတဲ့ အဆိုကို ကိုပေါက သဘောကျမိတယ်ဆို တော့ ဆရာ ကန်တော့ပွဲကျရင် ကိုပေါက ကြမ်းပေါ်မှာ ကျုံ့ ကျုံ့ ထိုင် ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ အညီ ကန်တော့ပြီးမှ ”ပော့...ဆရာ ဆရာမ တွေ...နင်တို့ ကို ငါ ကန်တော့တယ်နော်...” လို့ များ အော်ပြောမလား သိချင်မိပါသည်။ ဆရာ / ဆရာမ တွေ ဖက်မှလဲ သိတတ် ရိုသေတတ်လိုက်တဲ့ ငါတို့ တပည့်လေး ကိုပေါ လို့ များ ၀မ်းသာကြည်နူးနေမလား သိချင်မိပါသည် ခင်ဗျား။
Thuyein.... ဆရာကန်တော့ပွဲဥပမာကို ထောက်ရှုလျှင် အပြုအမူ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုသည်ကို မိတ်ဆွေနားလည်မှု လွဲမှားနေသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းပြောတဲ့ အပြုအမူရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုသည်မှာ ကာယကံမြောက်ပြုလုပ်သော ယဉ်ကျေးမှုကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Deed ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ယခင် ဘွန်ဆိုင်းသဘာဝပို့စ်အတွက် ကွန်မင့်ထဲမှာတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဝေါဟာရကိုပါ ရှင်းလင်းအောင် ထည့်ပေးဖြစ်ပေမယ့် ဒီတကြိမ်မှာ ကျနော် ထည့်ပေးရန် ကျန်ရစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။) Deed ရဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို နားလည်အောင် ဥပမာပေးရသော်.... မြန်မာစကားတွင် ဈေးရောင်းသူများအား “နှုတ်ချိုပြီး လက်တိုဖို့” ကို သင်ပေးတတ်ကြသည်။ လက်တိုခြင်းဆိုသည်မှာ ပိုပိုသာသာ ထည့်မပေးရန်၊ ပေးသင့်သည်ထက် လျှော့ပေးရန် အဓိပ္ပါယ် ထွက်ပါသည်။ နှုတ်က ယဉ်ကျေးနေသော်လည်း တကယ့်အပြုအမူ (deed)က မယဉ်ကျေးခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အပြောရိုင်းသော်လည်း စိတ်ရင်းဖြူစင်သည့်အလျောက် သူ့လုပ်ရပ်များကို ကျနော်တို့ အလေးထားရသည် မဟုတ်ပါလား။ ဤအကြောင်းများနှင့် ပတ်သက်သော ကျနော့်သဘောထားကို သိလိုပါက ကျနော့်ဘလော့ဂ်ဖွင့်ကာစက၍ ရေးခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သည့် ပို့စ်များကို ရှာဖတ်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ဖတ်ပြီး လက်ခံချင်မှ လက်ခံပါ။
အမှန်တော့ ပို့စ်တွင် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေနပ်လျှင် ပြဿနာမရှိနိုင်ဆိုသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ အထူးတလည် ယဉ်ကျေးပြနေရန် မလိုအပ်အေသ်ာလည်း အကြောင်းမဲ့ ရိုင်းစိုင်းစွာ သုံးနှုန်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အထူးတလည် ယဉ်ကျေးပြစရာမလိုဘဲ သာမာန်ဝေါဟာရများကို သုံးစွဲလည်း ရနိုင်ကြောင်းကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ် စိတ်စေတနာကောင်းဖို့သာ အဓိကဟု ဆိုခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကွန်မင့်များမှာ ယဉ်ကျေးရန်မလိုဟု ဆိုကာမျှနှင်ပင် ရိုင်းပျရန် တိုက်တွန်းနေသည်ကို အံ့သြစဖွယ်တွေ့ရပါသည်။ စိတ်စေတနာကောင်းရှိသည်ဆိုလျှင် ကြိုးစားအားထုတ်၍ ရိုင်းပြနေရန် မလိုအပ်ပါ။ တာ့တာ ဆိုသည့် စကားသည် ရိုင်းပျစိတ်နှင့် သုံးစွဲခြင်း မဟုတ်သည်ကို သတိပြုပါ။
ဆရာကန်တော့ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော့် အယူအဆ ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ ဆရာများကို ကျေးဇူးတင်သည်ဆိုလျှင် ဆရာများသင်ကြားပေးလိုက်သော ပညာဖြင့် လောကကြီးတွင် သမာအာဇီဝနှင့် အသက်မွေးမည်။ သူတပါးအပေါ် မဟုတ်မတရားမလုပ်။ တရားသဖြင့် အသက်မွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆရာကန်တော့ပွဲကို ကမကထ ပြုလုပ်နေသူများတွင် (အားလုံးမဟုတ်။ အချို့သောသူများမှာ) မတရားသောနည်းလမ်းဖြင့် စီးပွားရှာ၊ လူအများစု ချွေးနည်းစာကို အာဏာရှင်နှင့်ပေါင်း၍ ဂုပ်သွေးစုပ်နေသူများလည်း ပါရှိလေရာ ကျနော့်တဦးတည်းဆန္ဒအရ ထိုသူများနှင့်အတူ ကြမ်းတပြေးတည်းထိုင်ကန်တော့ရန် ဆန္ဒမရှိသဖြင့် တက်ရောက်ကန်တော့လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
"ဆရာကန်တော့ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော့် အယူအဆ ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ ဆရာများကို ကျေးဇူးတင်သည်ဆိုလျှင် ဆရာများသင်ကြားပေးလိုက်သော ပညာဖြင့် လောကကြီးတွင် သမာအာဇီဝနှင့် အသက်မွေးမည်။ သူတပါးအပေါ် မဟုတ်မတရားမလုပ်။ တရားသဖြင့် အသက်မွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆရာကန်တော့ပွဲကို ကမကထ ပြုလုပ်နေသူများတွင် (အားလုံးမဟုတ်။ အချို့သောသူများမှာ) မတရားသောနည်းလမ်းဖြင့် စီးပွားရှာ၊ လူအများစု ချွေးနည်းစာကို အာဏာရှင်နှင့်ပေါင်း၍ ဂုပ်သွေးစုပ်နေသူများလည်း ပါရှိလေရာ ကျနော့်တဦးတည်းဆန္ဒအရ ထိုသူများနှင့်အတူ ကြမ်းတပြေးတည်းထိုင်ကန်တော့ရန် ဆန္ဒမရှိသဖြင့် တက်ရောက်ကန်တော့လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။"
ပေါတောတော ကြီး မင်းဘော်ဒါ ရီတာ ဖက်ကနေပြီး လူထု ကိုတိုက်ခိုက်ချင် ရင် လည်း
ဒီ လိုမျိုး ဟာနဲ့မ အာ နဲ့လေကွာ
လူတွေက မင်းကို ဘို လမ်းနီး ချင်တယ် ထင်ကုန်ဦးမယ် ဟ
ဒေါ်အမာ အကြောင်း ရေးမယ်လို့ အရင်ထဲက ပြောခဲ့ တယ် လို့တော့ မုန်လာဥ မလုပ်နဲ့နော်.... ဟင်း ဟင်း......
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ဗျာ . . . သူများတွေးတာနဲ့မတူဘဲ နည်းနည်းလေးကွေ့ကောက်တွေးပြီး ပွဲဆူအောင်လျှောက်ရေးနေတာပါ။ အမိ အဖက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောဆိုနေထိုင်တတ်ဖို့ ဆုံးမခြင်းကို ခံထားရတဲ့ မြန်မာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို အသုံးအနှုံးသုံးသင့်သလဲသိမှာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုပေါစဉ်းစားပေးပါ . . . အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ သားသမီးတစ်ယောက်ယောက်က “ ဟယ်လို ဖားသား ... အိုင်(I) တို့ ယူ့ (you) အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဒိုနေးရှင်း(donation)လုပ်ခဲ့တယ်။ ဖားသားကြီး သာဓုသာခေါ်ပေတော့ ” လို့ပြောတာနဲ့ “ ဖေဖေ သားတို့/သမီးတို့ ဖေဖေ့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အလှုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဖေဖေ.. သာဓုခေါ်ပါဖေဖေ” လို့ပြောတာ... မြန်မာလူမျိုးမိဘတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်ပြောနည်းက စိတ်ကိုပိုပြီး ကြည်နူးစိတ်ဖြစ်စေနိုင်မလဲမသိဘူး။ ကိုပေါကတော့ “ဘယ်လိုပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ လက်ခံတယ်ဗျာ“ ဆိုပြီးပြောမယ်ထင်တယ်။ just my guess :D
I do agree partially “like father, like son”. I’d rather prefer to access by individual characters.
However, it isabig satire of Kama !
Grandmother taught peoples to obey polite and ethical ways but not own grandson.
Son of national hero came to villain by suing only sister who got peoples applauded.
Son ofawell-known religious author wasabig drunkard.
There are so many of similar events around our neighborhoods.
Everyone has worn out events not dare to show others.
Please see yourself, your relatives, how purify your ?
I am not innocent, groomed by ordinary family but never used crude words to peoples in cold blooded especially on paper.
On one day, Payback everything what we did.
Pls read "rude" instead of "crude" on my previous comment.
I am not innocent, groomed by ordinary family but never used "rude" words to peoples in cold blooded especially on paper.
ကိုပေါ ပြောသော ပို့ စ် များကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှု လေ့လာ လိုက်ပါဦးမည်။ ကျွန်တော် ရေးသားပြီး ကွန်မန့် ပါ အကြောင်းအရာများကို အနည်းငယ် ထပ်မံ ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်နေသေးသည်ပာု ယူဆမိသဖြင့် အနည်းငယ် ထပ်မံ ရေးသား လိုပါသည်။ စကား တလုံးတည်းကို ပြောဆို သုံးစွဲသည် ဖြစ်ပါစေ ပြောသူ၊ အပြောခံ ( အညွှန်းခံရသူ) ပြောဆိုသည့် နေရာ အချိန်အခါ (တခါတရံ ပြောဆိုသည့် လေသံ၊ အမူအယာ) တို့ ကို လိုက်၍ ရလာဒ်၊ အကျိုးဆက်၊ ရိုက်ခတ်မှု တို့မတူနိုင် ကြောင်း ပြောကြားလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ချက် တခု (ဥပမာ အသက်) ကြောင့် ထိုသတ်မှတ်ချက် အတွင်း ရောက်နေသူများ အားလုံး ကို တတန်းစားတည်း (ရိုသေလေးစားစွာ) ဆက်ဆံရမည်ပာု ပြောနေခြင်း မပာုတ်ပါ။ ရိုသေလေးစားဖွယ် မရှိပာု မြင်သောကြောင့် ”သန်းရွှေ” ပာုသာ ခေါ်ပါသည်။ ( တခါတရံ ဆဲသော စကားလုံး လေးများပင် ကပ်ပါလာပါသေးသည်။) သို့ သော် နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ငယ်ရွယ်သည့် ကျွန်တော်တို့ လေးစား ချစ်ခင်သော လူထု ခေါင်းဆောင် ကိုမူ ”အမေ” ”အန်တီ” ”ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ပာုသာ ခေါ်ပါသည်။ လူအများလဲ ထိုသို့ သာ ခေါ်ကြပါသည်။ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်ပါလျက် ”စုကြည်” ”အောင်ဆန်းစုကြည်” ပာု ခေါ်ပါက ရိုင်းပျခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် အနောက်နိုင်ငံသား တဦးက ”စုကြည်” ”အောင်ဆန်းစုကြည်” ပာု ခေါ်ဝေါ် ပြောဆိုလာပါမူ ကျွန်တော်တို့ ရိုင်းပျသည်ပာု မပြောဆို နိုင်ပါ။ သူနေထိုင် နားလည်သော ယဉ်ကျေးမှု အတွင်းမှ နာမည်ခေါ် စနစ်အရ ခေါ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၃/၄ နှစ် အရွယ် ကလေး များ သံဃာတော်များကို ”တာ့တာ” လုပ်တာ (ပြောတာ) မည်သည့် အကြောင်းမှ ပြောစရာ မရှိသော်လဲ ၃၀/၄၀ အရွယ်များ ”တာ့တာ” လုပ်တာ (ပြောတာ) ကမူ ပြောစရာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အပြောရိုင်းသော်လည်း စိတ်ရင်းဖြူစင်သည့်အလျောက် သူ့လုပ်ရပ်များကို ကျနော်တို့ အလေးထားရသည် မဟုတ်ပါလား။“ ပာု ကိုပေါပြောသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ် သည် နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ကြမ်းတမ်းသော စကားများကို ပြောနေရချိန်မှာ လွတ်လပ်ရေး ရခါနီး နောက်ဆုံး တွန်းအားပေးနေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူလူထု အပေါ် အားမရစိတ် ဂရုဏာဒေါသ နှင့် ပြောနေခြင်း ဖြစ်သလို လူထုကလဲ သူ့ စေတနာ၊ အနစ်နာခံမှု တို့ ကို မြင်နေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်မှန်၊ လူမှန်၊ နေရာမှန် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသုံးချက်မှ တချက်ချက် လွဲသွားသော အခါ ၁၉၆၀ ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီးနောက် တွင် ဦးနုက ငါးပါးသီလ ပောာကြား၍ မဲဆွယ်နေစဉ် ဦးကျော်ငြိမ်းက ”နိုင်ငံရေး သမား တဦး ဦးထိပ်ပန်ဆင်ရန်မှာ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အကျိုးသာဖြစ်၍ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အကျိုး အတွက်ဆိုပါက လိုအပ်လာပါလျှင် ငါးပါးသီလကို ဖောက်ဖျက်နိုင်ရမည်” ဆိုသည့် သဘော ပြောရာ (အတိအကျ မပာုတ်ပါ။ သဘော အတူတူသာ ဖြစ်ပါသည်) အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအရ သူပြောသည်မှာ မှန်သော်လဲ ပြည်သူတို့အခြေအနေ အချိန်အခါအရ နားမ၀င်နိုင်၍ ဦးကျော်ငြိမ်း ကွဲသွားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ခေါင်းထဲပေါ်သည့် ဥပမာများကို ထုတ်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများမှာ ကြီးမြင့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့ သာမာန်လူများနှင့် မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါ။
”ကွန်မင့်များမှာ ယဉ်ကျေးရန်မလိုဟု ဆိုကာမျှနှင်ပင် ရိုင်းပျရန် တိုက်တွန်းနေသည်ကို အံ့သြစဖွယ်တွေ့ရပါသည်။” ကျွန်တော့် ကွန်မန့် တွင်မူ ထိုသို့ သဘော ရောက်အောင် မရည်ရွယ် မရေးသားခဲ့ပါ။ ထိုသို့ သဘောရောက် / နားလည်သွားပါက ကျွန်တော်၏ အရေးအသား ညံ့ဖျင်းမှုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်မန့် တခုလုံးကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ရာ နောက်ဆုံးနားမှ ”ပော့...ဆရာ ဆရာမ တွေ...နင်တို့ ကို ငါ ကန်တော့တယ်နော်...” ဆိုသော စကားကို ပြောသလားပာု ထင်မိပါသည်။ ထိုစကားမှာ အပေါ်မှ အလေးအနက် ရေးသားသော ကွန်မန့် ကြီး တခုလုံး အပြီးတွင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်စေရန် အရွှန်း ဖောက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စကား တလုံး၊ စကားစု တခု ခြင်းကို သေချာကြည့်ပါက မည်သည့် အမှားအယွင်းမှ မရှိဘဲ နေ့ စဉ် ပြောဆို သုံးနှုန်းနေသော စကားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ”ပော့” ”ဆရာ..ဆရာမ...” ”နင်” ”ငါ” ”ကန်တော့”... သို့ သော် အားလုံးကို ပေါင်း၍ ၀ါကျဖွဲ့ ပြောလိုက်သော အခါတွင်မူ ပြောသူ၊ အပြောခံရသူ၊ နေရာ၊ အချိန် တို့ အရ သင့်မသင့် မေးမြန်း အရွှင်းဖောက် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သူ့ ကိုမှ ရိုင်းရန် မတိုက်တွန်းပါ။
စကား၊ အချိန်၊ နေရာ တို့ နှင့် ပတ်သက်၍ ဦနု ရေးသားသော တာတေစနေသားထဲတွင် သူ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ဘ၀က ကျောင်းသားတဦးမှ အိမ်ပြန်လို ၍ အိမ်မှပြန်ခေါ်စာ လာကြောင်း အင်္ဂလိပ် ဆရာ တဦးအား သွားပြောရာ ထိုဆရာမှ ကျောင်းသား`၏ စာကို တောင်းကြည့်ကြောင်း။ ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးခြင်း ဖြစ်ရာ အကယ်၍သာ သူ့ စာကိုသာ တောင်းကြည့်မည် ဆိုပါက ထိုဆရာကို အခန်းထဲမှ သူကန်ထုတ်ပစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးနုက လူပရိတ်သတ် အလယ်တွင် ပြောလိုက်ရာ ပရိသတ်မှာ အံသြ ငြိမ်သက်သွားကြောင်း။ ထိုစဉ်က တရားလွှတ်တော် တရားဝန်ကြီး လုပ်သူ အင်္ဂလိပ် တဦး လာပြီး ဦးနုတင်သော အမှုမှာ အကြောင်းအရာ ကောင်းသော်လဲ တင်ပြပုံ မမှန်၍ အမှု ရှုံးသွားပြီပာု ရယ်မော ပြောဆိုကြောင်း။ သူမှားသွားကြောင်း။ စသည်ဖြင့် ထုတ်ဖေါ် ရေးသားထားပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ နေရာ၊ အချိန် တို့ ကို လိုက်၍ စကားပြောဆို သုံးနှုန်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်တော် ပြောကြားလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ှ”ဆရာကန်တော့ပွဲ” ပာု မြင်သာအောင် ကျွန်တော် အလွယ် ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကန်တော့သည့် အခါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကမကထ ပြုသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော် ကိုပေါနှင့် သဘောခြင်း တူပါသည်။ အခြားသူများလဲ အနဲနှင့် အများဆိုသလို တူကြမည် ထင်ပါသည်။ သွားခြင်း မသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ မှ ပြောစရာ မရှိပါ။ ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ် ဖြစ်ပါသည်။ သွား၍ လေးစားရိုသေသည် ပာု မပြောနိုင်သလို မသွား၍လဲ မလေးစားမရိုသေ ပာု မပြောနိုင်ပါ။ သို့ သော် အကျယ်ချဲ့ မပြောတော့ပါ။ အဓိက ဆွေးနွေးသော ခေါင်းစဉ်မှာ အခြားတခုသို့ သွေဖည် မသွားလို၍ ဖြစ်ပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှု ပာူသည်တွင် ”ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံး” (ကိုယ်အမူအယာ၊ အပြောအဆို၊ စိတ်အကြံအစည်) သုံးမျိုးလုံး ပါ၍ လူ၊ နေရာ၊ အချိန် တို့ ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြောဆို သုံးနှုန်းရန်လို ကြောင်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သစ်ပင် ကိုမြင်သလို၊သစ်တော ကိုလဲ မြင်တတ်ပါစေ။
နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာပါ။
ကိုယ့်သား ကို ကိုယ် မေ---ိုးလေး ပြောရင် သင့်တော်သေးပေမဲ့(ဒါလဲတကယ် က ရိုင်းစိုင်းမှုပါ)---
ကိုယ့်အဖေ ကို ကျနော့မ---ေ--ိုးကြီး ပြောရင်သင့်ပါ့မလား။ စိတ်ထားဖြူတယ်ထားပါဦး။
Culture; Civilization & Civics ကွဲကွဲပြားပြား သိအောင်လုပ်ပါဦး။
ကိုပေါလဲ အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ presentation တွေ အများကြီး လုပ်ဘူးမယ်ထင်ပါတယ်။ Ladies& Gentlemen လို့အာလုပ်ချီသလား၊ Hi-Buddies လို့ အာလုပ်ချီသလား။
ဒေါင်း ကတာ မြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လား။ ရှေ့ ကကြည့်ရောင်စုံလှနေတာဘဲ။
အက၊အပြ၊ ကို သိပ်ဦးစားမပေးပါနဲ့ ဗျာ။
နိုင်ငံရေးအယူလေးတချို့ လှသားနဲ့ ။
Daddy--I'll stay together with my boy-friend from now on လို့ကိုပေါသမီးလေး က ပြောလာရင်ကော--ဒါ ခေတ်ဘဲလေ၊ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာတာဘဲလို့ကိုပေါ နှလုံးသားထဲက မထိခိုက်ဘဲ လက်ခံနိုင်တဲ့ အချိန်ကျရင်တော့ ကိုပေါ နဲ့ ဆက်ပြောကြမယ်။
ကျနော်မောင်သန့် ပါ။
Nga Paw! Crazy Idiot ! Cheers Carry on ! Everybody know u r "South Yuu". U can say as u like
ကိုပေါဘာသာရေးအကြောင်းပြောလာရင် ရီချင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လောက်လိုက်နာတယ် ဆိုတာနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက် ပုလင်းထောင် ပြီး သောက်နေသရွေ့ ဘာသာရေး အကြောင်းဘယ်လောက်ပြောပြော အသိတကယ်မပါပဲ ပြောတာမှန်းသိသာတယ်။ တကယ်သိတဲ့သူက အနည်းဆုံး သီလလုံတယ်မမေ့ပါနဲ့ ။ အခြေခံ ငါးပါးသီလ တောင် မထိမ်းတာဟာ ဘုရားရဲ့ အာဏာစက်ကို ဖီဆန်တာပါ။ မူးပြီးရမ်းမှ သီလကျိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းကြီးတွေကို အရိုအသေမပေးနိုင်တာကလဲ တလေးတစား မဆက်ဆံနိုင်တာလဲ ခံနေတဲ့ မာနလေး၊ အဲဒါမလေးမရှိရင် အကုန်လုပ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ လျှော့တွေးတတ်ကြတယ်။
Copy from great London stayed an intellectual's remark in his own FB:
"BO : အံ့ဘွယ်ဘရိန်းပဲ တိုင်းပြည်အစုတ်အပျက် ပညာရေးမကျက်တကျက်ကထွက်လာပီး နေရတာလဲ အရိုင်းအစိုင်းတရုတ်ပြည်ဆိုတော့ ဘာသာစကားနဲ့ ကာလ်ချာတခုကို ပျိုးထောင်တာ နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိတာ မသိရှာ။ စောက်ရူးရေး၍ စောက်ပေါများအားပေးသောဘလောက်တခုပဲ"
14 October at 16:24 • Comment •LikeUnlike • View feedback (3)Hide feedback (3) • Share • Flag
This guy isafoul-mouth person trying to stand at new profession after disqualified to pursue MRCP or FRCS.
Most Myanmar stands their own professional role in Singapore and surprise on his uncultured words to obey culture.